Carles Rexach oo Daaha ka rogay SHEEKO DHEER oo aadan ka garaneyn Lionel Messi!! – Gool FM
Carles Rexach oo Daaha ka rogay SHEEKO DHEER oo aadan ka garaneyn Lionel Messi!!
(Europe) 16 Maarso 2018. Lionel Messi ayaa si xun Chelsea ugu Karbaashay Nou Camp isagoona labo gool ka xareeyay mid kalena ku dhiibay.
Haddaba Carles Rexach oo ah ninkii soo arkay Mucjisdan iyadoo yar ayaa daaha ka rogay Sheeko xiiso leh:
Xiddiga 5-ta jeer ku guuleystay Ballon d’Or ayaa ahaa mid tabar yar oo Caato ah markii ugu horreysay uu Carles Rexach arkayay 2000 maadaama uu xilligaa ahaa kuwa ciyaartoyda u soo wiideeya Barcelona.
Charly oo iminka ah 71-jir ayaa Yiri isagoo ka sheekeynaya Messi:
“Argentina ayaan ku sugnaa markii ugu horreysay ay ii sheegaan xarfaankan lagu magacaabo Messi.
“Laakiin waxaan mooday inay ka hadlayaan Wiil 18-jir ah ama 20-jir, intaan joogo Argentina waan eegi doonaa isaga.
“Laakiin Dabcan, markii ay ii sheegeen inuu 12-jir yahay waan yare yaabay.
Carles Rexach oo ka hadlaya markii ugu horreysay uu la kulmo mucjisada yar ayaa yiri:
“Shanta ayaan imid goobta waan eegay waana socday, markale ayaan eegay.
“Kubbada cagta waa wax ay koox wada ciyaarto, soo sax maaha? Laakiin canugan garoonka oo dhan kaligiis ayaa ku ciyaari karaa, kubbada ayuu soo qaatay dhammaan ayuun u gooyay gool ayuuna dhaliyay.
“Wuxuu lahaa Awood aan caadi ahayn, waxaaba loo dhalay inuu ciyaaro kubbada cagta.
“Markii aan dib ugu soo laabtay fadhiga, waxaan iri waa inaan la soo saxiixanaa isaga! Canugaas aduun kale ayuuba ka yimid.
“Jir ahaan aad ayuu u yaraa, wax yar oo caato ah, laakiin markaad aragto isagoo ciyaaraya, wax kale ayuu ahaa sida uu hadda yahay oo kale.
Intaa kaddib Rexach oo ka sheekeynaya sida Yaabka leh oo ay ula soo saxiixdeen iyo in Heshiiskiisii ugu horreeyay lagu qoray Tiish ka Maqaaxida ayaa yiri:
“Messi Aabihii ayaa macquul ahaan yare xanaaqay. Wuxuu ii shegay inuu tagayo maxaa yeelay wuxuu dareemay inay ku dagaalamayaan isaga.
“Balan ayaan ka qaaday oo ah inaan heshiis ka saxiixaneyno wiilkiisa si aan u caddeeyo midaa waxaan saxiixay cad yar oo warqad ah.
“Sidaa darteed Kabalyeerigii ayaan waydiistay wuxuuna ii keenay….Tiish!
“Midaa ayaan ku qoray, sida anoo ah agaasimaha farsamada ee kooxda kubbada cagta ee Barceloan waxaan go’aansaday inaan la saxiixdo Lionel Messi waxaana Saxiixay Tiishka.
Carles Rexach oo weli ka sheekeynaya Messi ayaa yiri:
“Marka ay dadku maqlaan Taariikhda Messi waxay u muuqataa sida Sheeko Baraleey.
“Saas ay tahayna dhabtii wuu dhibtooday si uu halkaa u gaaro. Laakiin dhibtaas waxay ka dhigtay isaga mid ka sii xoogan.
“Wax sahlan ayay ii noqoneysaa aniga inaan iraahdo waan ogaa waxa uu noqon doono Messi. Laakiin Maya. Waxa aan ka arkay Messi wuxuu ahaa wiil haddii aysan waxba ku dhicin, haddii uusan waalan ama uusan go’aansan inuu kubbada cagta sii ciyaaro ama uusan gaarin dhaawac daran- inuu hubaashii noqon lahaa laacib heer sare ah.
“Laakiin kubbada laga ciyaaro Barcelona mid ku haboon ayay ahayd sidoo kale, Haddii aad Messi ku darto Barcelona ama aad Barcelona ku darto Messi, intaa kaddib natiijada waa midan.”.
Isku soo wada duuboo Messi-gaas wuxuu iminka Jeebka ku shubtaa usbuuciiba mushaar dhan 500,00 oo bound. Shan jeer ayuu ku guuleystay Ballon d’Or, goolasha uu u dhaliyay kooxdiisa Barcelona waxay sii cago cageynayaa 600.
MESSI oo aad u yar
GOOGOOSKA: Besiktas vs Bayern Munchen 1-3 (1-8) (Bayern oo soo baxday)
Chelsea oo ugu dambeyn xalisay Caqabadii heysatay